K Kuuriya: Iskudey lagu galay doonta - BBC News Somali
K Kuuriya: Iskudey lagu galay doonta
Image caption baadi goobka loogu jiro dadka laghu la'yahay musiibada doonta quustay ee Kuuriya Koofureed
Kooxaha badbaadada ee dalka Kuuriyada koofureed ayaa sameeyay iskudeygii ugu ballaarnaa si ay u helaan dadka weli la la’yahay ee saarnaa doonta badda ku degtay.
Balse, cimilada oo xun iyo aragtida oo aysan suurtagal ahayn ayaa hakiyay baadigoobka ay ku galeen gudaha markabka.
Xubin ka mid ah ilaalada xeebaha Kuuriyada koofureed ayaa sheegay in kooxda ay isku dayeen inay daaqad ka soo saaraan saddax Mayd, balse daaqaddii oo la jebin waayay ayaa hor istaagtay in lasoo saaro.
Kooxaha baadigoobka oo isticmaalayay xargo si ay u caawiyaan ayaa gaaray qolalka ugu sareeyo ee doonta, balse weli umeysan suurtagalin inay gaaraan qolalka yaryar ee hoose.
In kabadan 200 oo qof oo u badan caruur Iskuul dhigata ayaa weli la raadinayaa. Kabtankii doonta iyo laba xubnood oo kale ayaa la xiray.
Image caption Kabtanka doonta quustay oo la xiray
Dhanka kale, qaraabada dadka la la’yahay ayaa markii ugu horeysay la tusay fiidiyow laga soo duubay raadinta ka socoto biyaha badda hoostooda ee lagu kalay doonta.
Waxaa filikaasi ka muuqday, mid kamid ah kooxaha badbaadinta oo u dhaqaaqay dhanka doonta quustay, baaritaanna sameynaayo.
Qaar kamid ah ehelada aya si cara leh uga codsaday maamulka inay baaritaan dheer ku sameeyaan qolalka gudaha.
Qaar ka mid ah dadkaasi ayaa bilaabay inay iska qaadaan dhiiga hida sidaha si ay loo aqoonsado maydadka laga soo saaray doonta lagu magacaabay Sewol ee dalka Kuuriya Koofureed.
Xubnaha dowladda ee qeybta ka ah baadi goobka ayaa sheegay in howlgalka uu qaadan karo laba bil.
Saddax wiish oo waxyaabaha culus lagu jiido ayaa dul sabeynayo biyaha badda, meel ku dhow doonta quustay, balse xubnaha dowladda ayaa sheegay inaan la adeegsan doonin illaa ay ka xaqiijinayaan in qof nool uusan ku jirin gudaha.
Image caption Kooxaha bad baadinta oo gudaha u galaya doonta quustay